Ardayda Puntland oo u fariistay Imtixaanada shahaadiga ee Dugsiyada 8aad iyo 12aad.(Masawiro+Cod)
Garoowe:-Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta furey imtixaanaaadka Shahaadiga Puntland kaas oo si rasmi ah u furmay maanta waxaana imtixaanka u fariisan doona boqolaal arday oo ka tirsan dugsiyada 8aad iyo 12aad.
Munaasabada lagu furay imtixaanaaadka Shahaadiga Puntland ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka waxbarashada Cabdi Faarax Juxa ,wasiirka hawlaha guud Eng.Daahir Xaaji Khaliif ,wasiir ku xigeenka caafimaadka Dr.Maxamed Ducaale iyo madax kale .
Wasiirka waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa warbixin kooban siiyey madaxweynaha Puntland wuxuuna sheegay in arday gaaraysa 8,515 fasalada 8-aad iyo 12-aad u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ee Puntland waxaana uu xusay wasiirka waxbarashada in kormeerayaashu gaarayaan 73 halka ilaaliyaasha imtixaanka ay gaarayaan 450 Macalin.
Madaxweynaha Puntland ayaa Khudbadiisa ku soo qaaday dastuurka DFS isaga oo ku baaqay in la dhowro isaga oo eedeyn u soo jeediyey Wasiirkii hore ee Dastuurka DFKMG Cabdiraxmaan Xoosh oo hada ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale soo qaaday Maamulka Juba Land wuxuuna ku baaqay in la dhowro Dastuurka DFS iyo midnimada dalka wuxuuna sheegay in Soomaali ku heshiisay nidaamka Federaalka ah.
Hoos ka Dhageyso Khudbadii Madaxweynaha Puntland Dr.C/raxmaan Maxamed Faroole furitaanka imtixaanaadka shahaadiga ee Dugsiyada 8aad iyo 12aad.